WaiYanLin: February 2007
စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဘာသာပြန်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ရေးသူနာမည်အတိအကျမပါပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရေးခဲ့တယ်လို့ပဲ ပါပါတယ်။ လူတစ်ယောက် နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကို ရေးထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်တုန်းက အိပ်မက်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေအများကြီးရှိခဲ့ကြမှာပါ။ အဲဒီအထဲက ဒီအချိန်မှာ ဘယ်နှစ်ခုများ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတာတော့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဖြစ်လာတာရှိသလို မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်မက်တွေဟာ သိပ်ကြီးကျယ်ခဲ့ကြမှာပါ။ ကြီးလာလေ အိပ်မက်တွေဟာ သေးသွားလေပါပဲ။ လူတွေအများစုဟာ အိပ်မက်တွေကို ပြောင်းပြန်မက်နေကြပါတယ်။ ငယ်ရာကကြီးသွားရမယ့်အစား ကြီးရာကငယ်လာကြတာများပါတယ်။
ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေခံကစမှ အောင်မြင်မှာပါ။ ရည်မှန်းချက်အကြီးကြီးတွေရှိရင် အောက်ခြေအသေးလေးတွေကစမှရမှာပါ။ ပထမဆုံးက ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို ကိုယ်သိဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူငယ်အများစုဟာ ပန်းတိုင်အတိအကျ သိပ်မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ရာ လူအများလုပ်နေတာတွေနောက်ကိုပဲ လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုကိုယ် ရေးရေးလေးပဲ ပုံဖော်နိုင်သေးပါတယ်။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 12:30 AM2comments Links to this post
Labels: others, poem, thoughts
တရုတ်ပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဦးနှောက်ယိုစီးမှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဘေဂျင်းမှာရှိတဲ့ the Academy of Social Sciences ကသူ့ရဲ့ Report မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကစပြီးယနေ့ထိ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသွားသင်ကြတဲ့ တရုတ်လူမျိုးများရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံလောက်ဟာ သူတို့နိုင်ငံကို ပြန်မလာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတစ်ချို့နဲ့ ဘီဘီစီက မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဘာကြောင့်အဲဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အဓိကအချက်တွေကတော့ လူနေမှုဘ၀အဆင့်အတန်း၊ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိုင်မှု၊ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ အနာဂတ်အတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်မှု၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဟာ တစ်လကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀ လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ ယွမ် ၂၀၀၀ လောက်ပဲရကြတဲ့နေရာကို ဘယ်သူပြန်နိုင်မှာလဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ကူညီကြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေခဲ့ကြဘူး။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ချမ်းသာသူနဲ့ဆင်းရဲသူကြားကွာဟချက်တွေကလည်း ကြီးမားတယ်။ ခုချိန်ထိ အင်တာနက်ကို ကန့်သတ်ချက်များစွာနဲ့ အသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအားလုံးဟာ အိမ်ကို ပြန်ချင်စိတ်ရှိပါလျှက် မပြန်နိုင်ကြပါဘူး။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေကို တစ်ချို့တွေက အမြင်နည်းနည်းလွဲချင်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ စာတွေသင်ကြ၊ အလုပ်တွေလုပ်နေကြလို့ပါ။ ကိုယ့်တက်လမ်းကို ရှာကြတာ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ သဘာဝပါ။ တစ်ကယ်လို့သာ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာတွေကိုလာစရာမလိုလောက်အောင် ပြည့်စုံနေကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကများ အပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးတော့ လူမျိုးခြားကို ဆရာခေါ်ချင်ကြမှာတဲ့လဲ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရောက်နေသူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ တကယ်လို့သာ ခင်ဗျားတို့အဲဒီနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေရသလိုနေနိုင်မယ်ဆိုရင် ပြန်လာကြမှာလားလို့။ ငြင်းမယ့်လူရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို ခင်တွယ်ကြတာချည်းပါပဲ။ အမြဲတမ်းမနေနိုင်တောင်မှ ခဏခဏတော့ပြန်လာချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီတရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ သိပ်မထူးပါဘူး။ အဲဒီသတင်းလေးကို ဖတ်မိမယ်ဆိုရင် မွေးရပ်မြေနဲ့ဝေးနေကြသူတွေရဲ့ဘ၀တွေကို စာနာနိုင်လောက်ပါရဲ့ဗျာ။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 7:57 PM0comments Links to this post
UAT stands for User Acceptance Testing which isaprocess to getaconfirmation from Subject Matter Expert(SME). SME isaperson who is knowledgeable inacertain area. SME mostly can be an owner or client of the product or software. To be simple, UAT isaprocess of testing done by the end-user of the software. It is one of the final stage of the software development process before releasing the product to the general public. A person who will do UAT should know the requirements of the final outcome.
UAT indentify whether the software fufill the requirements, all the functions are working properly or any other modification are needed. After UAT process is done, the feedbacks will go to the developers to fix the issues.
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 1:53 PM0comments Links to this post
Microsoft ၏ Network Operating System များသမိုင်းအကျဉ်း (၁)
Microsoft ရဲ့ Network Operating System တွေမှာ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Version ကတော့ Windows For Workgroups ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း Windows For Workgroups ကို Version ၂ခုထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ပထမ Version ဖြစ်တဲ့ Windows For Workgroups Version 3.1 ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ Version 3.11 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ Version ဟာပထမ Version ကိုအသေးစားပြောင်းလဲမှုမျိုးနဲ့ ပြုပြင်မှုအနည်းငယ်သာလုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်ပြီးမကွာခြားပါဘူး။
အဲဒီအချိန်တုန်းက peer-to-peer စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ peer-to-peer ဆိုတာကတော့ network အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးဟာ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိပြီးတော့ ဗဟိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။ Windows For Workgroups ဟာအဲဒီအချိန်တုန်းက စီးပွားရေးနဲ့ အိမ်သုံးတွေအတွက်ပါ လူသိများခဲ့တဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြာရှည်မခံလိုက်ပါဘူး။ peer-to-peer network ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့် အသုံးပြုရာမှာအခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်။ Network အသေးစားလေးတွေမှာ ပြသနာမရှိပေမယ့် network ကိုတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ peer-to-peer network ဟာကွန်ပျူတာ ၇လုံးကနေ ၁၀လုံးကိုကျော်သွားရင်တော့ ပြသနာရှိလာပါတယ်။ Network မှာကွန်ပျူတာတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှ ဗဟိုကနေထိန်းချုပ်ပြီး manage လုပ်နိုင်မှုဟာအရေးပါလာပါတယ်။ နောက်ပြီးဖိုင်တွေကို မျှဝေအသုံးပြုမှုနဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေမှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေရှိလာပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ခုကို network အတွင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီကနေ access လုပ်ရာမှာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်အခွင့်အရေးတွေမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူကဒီဖိုင်ကို ကြည့်လို့ရမယ်၊ ဘယ်သူကကြည့်လို့မရဘူးလို့ သီးသန့်မရှိပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Windows for Workgroup ဟာအလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။
အဲဒီလိုအားနည်းချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် Microsoft ဟာနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Windows NT ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 2:46 PM0comments Links to this post
Labels: microsoft, network operating system, technology, windows
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 1:46 AM2comments Links to this post
အသက်၂၁နှစ် - စီးပွားရေးလုပ် - ရှုံး။
အသက်၂၃နှစ် - ဥပဒေပြုကောင်စီမှာဝင်ပြိုင် - အရွေးမခံရ။
အသက်၂၅နှစ် - စီးပွားရေးထပ်လုပ် - ထပ်ရှုံး။
အသက်၂၆နှစ် - ရည်းစားသေ။
အသက်၂၇နှစ် - သွက်ချာပါဒဖြစ်။
အသက်၂၉နှစ် - ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနေရာဝင်ပြိုင် - အရွေးမခံရ။
အသက်၃၄နှစ် - အောက်လွှတ်တော်မှာဝင်ပြိုင် - အရွေးမခံရ။
အသက်၃၇နှစ် - အောက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာ။
အသက်၃၉နှစ် - အောက်လွှတ်တော်မှာထပ်အရွေးခံရဖို့ဝင်ပြိုင် - ရှုံး။
အသက်၄၆နှစ် - အထက်လွှတ်တော်မှာဝင်ပြိုင် - အရွေးမခံရ။
အသက်၄၇နှစ် - ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ဝင်ပြိုင် - အရွေးမခံရ။
အဲဒီကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုကြည့်ပြီး ဘယ်သူလဲဆိုတာသချင်မှာပဲ။ သူကတော့ အသက် ၅၁ နှစ်မှာ အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အားကျစရာပဲ။ ဒီလောက်ခဏခဏဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကျော်ဖြတ်လာနိုင်တာ။ တစ်ခါလဲရင်တစ်ခါပြန်ထရမယ်။ နှစ်ခါလဲရင်နှစ်ခါပြန်ထနိုင်ရမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲ။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 1:28 AM2comments Links to this post
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 9:57 PM2comments Links to this post
ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ Calender ထည့်ချင်လို့ရှာနေတာကြာပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်လည်း မရေးတတ်ဘူး။ ရှာရင်းနဲ့ ဒီ Free Blog Content ဆိုတဲ့ဆိုဒ်မှာသွားတွေ့တယ့်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးလို့ရတယ်။ မဆိုးဘူး။ Code တွေကူးပြီး ကိုယ့်ဘလော့ထဲမှာ ထည့်လိုက်ရုံပဲ။ 100% Free လို့ရေးထားတယ်။ လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ရှိတယ်ဗျ။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 6:27 PM0comments Links to this post
အိုင်တီပီဆိုတဲ့ ဟာကိုလုပ်တာတစ်ပတ်ရှိသွားပါပြီ။ ဘာတွေလုပ်ရလည်းဆိုရင်တော့ မြင်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဘလော့တန်းပလိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တာကြည့်ရင် ဘယ်လောက်အားနေလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ မနက်ဆို စောကြီး (၈နာရီခွဲအရောက်) သွားရတယ်လေ။ ဟိုရောက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ခဏထိုင်၊ ပြီးရင် မနက်စာစား။ ကွန်ပျူတာရှေ့ပြန်ထိုင်။ တောင်လုပ်မြောက်လုပ်။ အားနေရင်အင်တာနက်မှာတောင်ရှာမြောက်ရှာလျှောက်လုပ်။ ဒီလိုနဲ့ တန်းပလိတ်အသစ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်က သူတို့ CMS (Content Management System) လုပ်နေတာကို ကူပေးရုံပဲလေ။ ပြီးခါနီးနေပြီဆိုတော့ ဘာမှသိပ်ကူစရာမရှိဘူး။ သူတို့လုပ်နေတာကို ထိုင်ကြည့်ပြီးလေ့လာရေးသဘောမျိုးလုပ်နေတာ။ ဟိုတစ်နေ့ကတော့ Server ပြောင်းတင်လိုက်တာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူး။ Debug ထိုင်လုပ်နေတာ တစ်နေကုန်ပဲ။ ကူတော့ကူပေးချင်တာ။ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိတာနဲ့ ထိုင်ပဲကြည့်နေလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ပတ်တော့ ၃ရက်ပဲသွားရမယ်ဆိုတော့ပျော်စရာကြီး။
အားလုံးပဲ Happy Chinese New Year!
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 2:18 PM0comments Links to this post
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 11:32 PM0comments Links to this post
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်
ပြောမယ့်သာပြောရပါတယ်။ ခုခေတ် မူလတန်းအထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေ ဒါဟာဘာလဲဆိုတာ သိကြသေးလားတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်တောင် ၀ါးတားတားဖြစ်ချင်နေပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်ရှိသော ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 11:44 PM0comments Links to this post
Its long time ago. But good idea.
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 9:35 PM0comments Links to this post
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 11:18 PM0comments Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ပို့စ်မှာ ကျွန်တော့်ကို ITP (Industrial Training Program) အတွက် ဈေးရောင်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စရေးခဲ့တယ်ဗျ။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်မရာတွေ ဘာတွေရောင်းရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူလုပ်ချင်မှာလဲ။ ပြီးတော့ ၂လကျော်တောင်မှ။ ဒါနဲ့ကျောင်းကိုလှမ်းပြီး စုံစမ်းရတာပေ့ါ။ ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲတို့ ဘာတို့ပေါ့။ နဲနဲတောင် အဟောက်ခံရသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာပဲ ရမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေတောင်ပါသေးတယ်ထင်တယ်။ အဲဒီမိန်းမက မျက်နှာကြီးကတင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်ကဘာပြောရမှန်းတောင်မသိ။ ပြောသေးတယ်။ ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့လိုချင်တဲ့ အချက်တွေက မြင့်တယ်တဲ့။ ခုထိ assign မလုပ်ရသေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်တဲ့။ မင်းကအဲဒါတွေလုပ်နိုင်လို့လားတဲ့။ မေးတဲ့ပုံက ကျွန်တော်က အဲဒါတွေမလုပ်နိုင်လို့ ဈေးသွားရောင်းခိုင်းခံရတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ နည်းနည်းတော့ တင်းတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုအပြောခံရတာ။ နောက်ဆုံးမှသူက သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ နောက်ဆရာတစ်ရောက်ကိုဆက်သွယ်ပါတဲ့။ ဒါနဲ့များသူက ကျွန်တော့်ကို ဟောက်နေသေးတယ်။ စောစောစီးစီးအဲဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပြီးရောပေ့ါ။
ကျွန်တော်လည်းအဲဒီဆရာကို အီးမေးပို့လိုက်တယ်။ နောက်ရက်မှာ ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်လာတယ်။ သိပ်တော့ လိုလိုလားလားလုပ်ပေးချင်ပုံမရဘူး။ ဒါကိုပဲလုပ်စေချင်နေပုံပဲ။ ကြည့်ရတာဘယ်သူမှလည်းဈေးရောင်းတာကိုလုပ်ချင်ပုံမရဘူးထင်တယ်။ ပြောသေးတယ်။ ဒါတွေက ခုခေတ်မှာအသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်မငြင်းချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ နည်းနည်းလေးနီးစပ်တာလေးတွေကိုပဲ လုပ်ချင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးသင်နေတဲ့ကျောင်းသားမှမဟုတ်တာ။ ဒီတော့ ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ တတ်နိုင်ဘူးလေ။ သူလည်းပြောမရတဲ့အဆုံး တတ်နိုင်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ပေးမယ်တဲ့။ ဘယ်ကဘယ်လို အဆက်အသွယ်ရလဲတော့မသိဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ SingTel ကလူတစ်ယောက်အင်တာဗျူးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော့်ကိုအကြောင်းပြန်တယ်။
နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အကြာမှာ ဖုန်းနဲ့အင်တာဗျူးတယ်။ ချက်ချင်းအဖြေမပြောနိုင်သေးဘူးတဲ့။ ကျောင်းကဆရာကို ပြန်ဆက်သွယ်မယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ရင်ခုံစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေလျှက်ပါပေါ့။ ဒီနေ့တော့ကျောင်းက မေးလ် လာတယ်။ ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့။ ကျွန်တော့်ကို စင်းန်တဲလ်က လက်ခံတယ်တဲ့။ ပျော်သွားပါတယ်။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီမှာ အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကူညီပေးတဲ့ ကျောင်းကဆရာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ကံကောင်းပါစေ မောင်ဝေယံရေ။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 10:43 PM0comments Links to this post